ဆိုးပေ၊ သူခိုးကြီး ည နဲ့ ကလဲ့စား… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဆိုးပေ၊ သူခိုးကြီး ည နဲ့ ကလဲ့စား…
ဆိုးပေ၊ သူခိုးကြီး ည နဲ့ ကလဲ့စား…
Posted by Yae Myae Tha Ninn on Oct 31, 2014 in Creative Writing | 15 comments
ဂျန်န၀ါရီ နောလစ်... ဆိုးပေ၊ သူခိုးကြီး ည နဲ့ ကလဲ့စား...
– သူ့နာမည်က ဆိုးပေ…
– နာမည်နဲ့ လိုက်အောင် ဆိုးတဲ့ပေတဲ့ ကောင်လေးပေါ့… သူ့ကို မတရားလာလုပ်ရင်လဲ ရန်ဖြစ်… သူများကို လုပ်နေတာမြင်ရင်လဲ အမြင်မတော်ရင် ၀င်ပါ… ဒီတော့ ပါလေရာငပွကြီးပေါ့…
– လူဆိုတာ အဆိုး ရှိသလို အကောင်းလဲ ပါတတ်ပါတယ်… အသားလွတ် ရမ်းကားဆိုးနေတာမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး… ပင်ကိုယ်ဓာတ်ခံကတော့ အဖြူ သက်သက်ပါ…
– သူများဈေးခြင်းတောင်း မနိုင်တာတွေ့ရင် ၀င်သယ်… အဘိုးကြီး၊ အဘွားကြီးတွေ လမ်းလျှောက်ရင် ၀င်ကူ… ကိုယ့်လမ်းသားနဲ့ သူများ ချရင် ၀င်ချ… ဒီလိုမျိုးကျ ချစ်လို့လဲ မဖြစ်သလို… ပစ်လို့လဲ မရ…
– သနားဖို့ကောင်းတာက သူများမိဘတွေဆိုရင် ရန်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ ကိုယ့်သားသမီးဘက်ပါတတ်ကြပေမယ့် သူ့အတွက်ကတော့ ဆန့်ကျင်ဘက်…
လက်ခုပ်ဆိုတာ ၂ ဖက်တီးမှ မြည်တာ…
နောက် ဘာသံမှ မကြားချင်ဘူးနော်…
– အဲဒါက ကူပြီး လိုက်ရှင်းပေးပြီး နားရွက်ဆွဲခေါ်လာတာ မဟုတ်ဘူး… သူများမိဘတွေက အိမ်ကို လာတိုင် ဒါမှမဟုတ် တဆင့်စကားကြားပြီး ဆော်ပလော်တီးရင်း ပြောတဲ့စကား…
– ဆိုးပေ ဘ၀ထဲ ဂြိုလ်ဆိုး ၀င်ခဲ့တယ်…
– တခုခုဆို ရှေ့က မားမားမတ်မတ် ရပ်တတ်…
– ခေါင်းခံတတ်တာက သူ့ကို ဒုက္ခ ပေးသွားတယ်….
– ဝေါ… ဝေါ…. ဝေါ…..
– ဖြောက်ဖြောက်.. ဖြောက်ဖြောက်ဖြောက်… ဖြောက်ဖြောက်ဖြောက်ဖြောက်…..
– ဟေးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး……. မိုးရွာပြီကွ….
– မယ်မယ်(အမေ) သား မိုးရေသော(သွား) ချိုးချင်တယ်…
– မချိုးနဲ့ဦး… ခဏပဲ ရွာတဲ့ မိုးက ဖျားတတ်တယ်…
– မိုးကြီးမှာပါ… သားသိတယ်… (ပြောပြောဆိုဆို အကျီင်္က ချွတ်နေပါပြီ…)
– ခဏ စောင့်ဦး … နောက် ၅ မိနစ်လောက်ထိ ဆက်ရွာရင် ဆင်းချိုး….
– ဟုတ်… မယ်(အမေ)….
– နောက် ၅ မိနစ်ကျော်တဲ့ ထိ ဆက်ရွာတော့ ဆိုးပေ အကြိုက်ပေါ့…
– သိသားပဲ… ဒီလောက် မိုးမည်းနေတာ ရွာမယ် ဆိုတာ… ဘောလုံးလေးကိုင်ပြီး မိုးရေထဲ ပြေးဆင်းသွားပါတယ်…
– သား … အကြာကြီး ချိုးမနေနဲ့နော်…. ( သူ့အမေအော်တာကို ဆိုးပေ မကြားတော့ပါ… )
– အင်း … ဒီကောင်လေးတော့ ပြောမရဘူး… ပြီးရင် သူပဲ ဟတ်ချိုး… ဟတ်ချိုး နဲ့….
– ဦး… ၀ဏ္ဏ ရှိလား…
– ရှိတယ်… စာဖတ်နေတယ်….
– ဟုတ်လား… ခေါ်လို့ ရလား ဟင်… မိုးရွာတုန်း ဘောလုံးကန်ကြမလို့…
– သူ.. မကန်လောက်ဘူး… ပြီးတော့ နည်းနည်းလဲ ဖျားချင်နေတယ်….
– ဟုတ်… ဒါဆို… သား သွားပြီ….
– အေး… အေး… အအေးပတ်ဦးမယ်နော်…
– ( သူမကြားတော့ပါ… ဘယ်ကြားမလဲ… ခေါ်မရမှန်းသိပေမယ့်… ခေါ်ကြည့်တယ်… စိတ်ကလဲ နောက်တယောက်ပြေးခေါ်ဖို့ လောနေပြီ… မဟုတ်ရင် မိုးတိတ်သွားရင် မကန်ရဘဲ နေမှာလေ…. )
– ဆိုးပေ… မင်းဆင်းလာပြီလား… ငါတောင် လာခေါ်တော့မလို့… ( ဇာနည် နဲ့ ချောကလက်မှိုတက်က အကြံတူနဲ့ လာခေါ်ကြတာပါ… )
– အေး… ငါ ၀ဏ္ဏကို ခေါ်နေတာ… သူ့ အဖေက မလွှတ်လို့… မလွှတ်မှန်းလဲ သိပါတယ်… ခေါ်ကြည့်ကြည့်တာ…
– အာ .. ခေါ်မနေနဲ့.. ရှုပ်တယ်… ကန်တတ်တာလဲ မဟုတ်ဘူး… ဒီမှာ ချောကလက်မှိုတက်လဲ ပါတယ်… လာ.. ပိုင်ပိုင်ကို သွားခေါ်မယ်…. (ဇာနည် )
– သင်ပေးရင် ရပါတယ်ကွာ… အေးး.. အေးး… ပိုင်ပိုင်ဆို မင်းခေါ် .. ငါ့ဆို သူ့အမေက ပေးကန်ခိုင်းချင်မှာ မဟုတ်ဘူး… ဖိုးထူးတို့ အိမ်ရှေ့နားမှာ စောင့်နေမယ်….
– ( ဇာနည် = ဆယ်အိမ်ခေါင်းသား… ဆိုးပေကို တော်တော်ခင်တယ်… အသက်ကွာပေမယ့် နှုတ်ကျိုးနေတော့ ရွယ်တူလို နာမည်ကို ခေါ်ကြတာ… ငယ်ငယ်တုန်းကဆို သူပဲ ပုံပြင်ပြောပြီး သိပ်ရတာ… )
– (ချောကလက် မှိုတက် = ဇာနည့် ညီ တ၀မ်းကွဲ … တလမ်းကျော်မှ လာလာ ကစားတဲ့သူ… )
– ( ပိုင်ပိုင် = အထည်ချုပ်သူဌေး ရဲ့ သား… ဆိုးပေနဲ့ ကစားမယ်ဆို သူ့မိဘတွေက သိပ်ခွင့်မပြုချင်… ဆင်းရဲလို့ နှိမ်တာလဲ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မည်… )
– အော်… ပိုင်ပိုင်ပါ ပါလာပြီပဲ… ( ဇာနည် ဘယ်လို စည်းရုံးရေး ဆင်းလာသည် မသိ… ဒါမှမဟုတ် သူ့အမေတွေ မင်္ဂလာဈေးသွားနေလို့… လစ်လာတာလား… ရတယ်.. ကိုယ်ခေါ်တာမဟုတ်… )
– ဟေ့ကောင်တွေ ဘာကြေးချမှာလဲ…
– ဂိုးတိုင် သိမ်းကြေး… ( ဇာနည် )
– ပြီးရောလေ… လူ ဘယ်လို ခွဲမလဲ… ကဲပါ… ငါပဲ ချောကလက်ကို ယူလိုက်မယ်… သေချာကန်နော်.. ချောကလက်… နောက်တန်း ကို ငါ ကြည့်မယ်… ပြန်မဆင်းနဲ့…
– ဒီလို နဲ့ မိုးလေးကလဲ တဖွဲဖွဲ… ကန်လို့ကလဲ ကောင်း… ၂ ယောက် ၂ ယောက်ဆိုတော့ ဂိုးကို အုတ်ခဲလေးကို ထောင်ထားရတယ်… လဲသွားရင် အဂိုး…
– ၀မ်းတူး ရိုက်လိုက်… ဆွဲလိုက်…ဇာနည်တို့က ပြန်ဖျက်လိုက်… သူတို့ ဆွဲသွားရင် နောက်က လိုက်လိုက်..ဆိုးပေတို့တွေက ပြန်ဖျက်လိုက်…
– ကြာတော့ အနီးကပ် ဆွဲသွား.. ကန်လို့ မရမှန်း ၂ ဖက်လုံးက သိလာတယ်… ဖျက် ပြီးရင်.. ဘောလုံးရအောင် အဝေးကနေ အုတ်နီခဲကို တည့်အောင် ကစ်ပြင်းပြင်းနဲ့ ကန်မှ ဂိုးရနိုင်မှာ…
– ဖုန်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး…. ဖောင်းးးးးးးးးးးး…. ဖတ်တ်တ်တ်တ်…. ဖုန်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
-( ဂိုးကွ… ဇာနည်တယောက် ဆိုးပေ ကန်လိုက်တာကို ထိန်းရင်းကာ…
– ဆိုးပေက.. ပြန်ထွက်လာတဲ့ ဘောလုံးကို ပြန်ထိန်းရင်း… ကန်မလို့ လုပ်တုန်း… ပိုင်ပိုင်တယောက် အားနဲ့ ပြေးပြီး ကန်ထည့်လိုက်တာ….)
– ဟာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာ… သွားပြီ… ပိုင်ပိုင် မင်းသွားကောက်…
– အာ… ငါ မကောက်ရဲဘူး… အဲဒီအရူးမကြီးက ဆဲလိမ့်မယ်… ( ပိုင်ပိုင် )
– မကောက်ရင် ဘယ်လို ဆက်ကန်မလဲ… ပြီးတော့ အဲဒါ ငါ့ဘောလုံးကွ… ပြန်ပါမလာရင် ငါ့ အမေ မေးရင် … သေပြီ….
– အာ…. မင်းပဲ ကောက်လိုက်ပါ… မင်းက ပြောရဲတာပဲ….
– မှန်တယ်.. ဒါပေမဲ့ မင်းကန်လိုက်တာလေ….
– မကောက်တော့ရင် တက်တော့မယ်ကွာ…. ( ဇာနည် )
– နေပါဦးကွာ… ငါ .. ပဲ… သွားပြောကြည့်မယ်… မထူးဘူး….
– အန်တီရေ… အန်တီ… ကျွန်တော် ဘောလုံးလေး ကောက်ချင်လို့… (တံခါး ဖွင့်လာပြီး… )
– ဟာ.. ကိုကြီးဆိုးပေပါလား… ဟုတ်.. ခဏလေးနော်… ထီးထုတ်နေလို့ ( အရူးမကြီး သမီးငယ် )
– (အမှန်တော့ အရူးမကြီးဆိုသည်မှာ မရူးပါ… သူ့ယောကျာင်္းနှိပ်စက်လွန်းလို့ နည်းနည်းဂေါက်နေတာပါ… ဆံပင်ကို ဒွေးကေညှပ်ပြီး တယောက်တည်း ဆဲနေတတ်တာပါ… )
– ရော့… ကိုကြီး… ( အရူးမကြီး သမီးငယ် )
– ( ဟဲ့.. သွားမကောက်ပေးနဲ့လို့ .. ပြောထားရဲ့သားနဲ့… နောက်တခါ ဘောလုံး ၀င်လာရဲ ၀င်လာကြည့် ငါ ဖောက်ပစ်မယ်… ) အရူးမကြီးက မကျေမနပ် နောက်ကနေ အော် နေပါတယ်…
– ဟေးးးးးးးးးးးးး… ဟေးးးးးးးးးးးးးးးးးးး ပြန်ရပြီကွ…
– လာ နေရာ ရွှေ့ကန်ရအောင်… ထပ်ဝင်သွားရင်… ရတော့မှာ မဟုတ်ဘူး…
– ဒါနဲ့ ထပ်ကန်ကြပါတယ်… သိတဲ့အတိုင်းပေါ့… ကစ်ကလေးတွေက အချိန်အဆ တော်တော့… ကွက်တိကို ထပ်ဝင်သွားပါတော့တယ်…………….. ဗျာ…………………………..
– ညီမလေးရေ… ညီမလေးးးးးးးးးးးးးး…
– ဟဲ့… ဘာလဲ… ( အရူးမကြီး )
– အော်… ကိုကြီး ထပ်ဝင်ပြန်ပြီလား… ( အရူးမကြီး သမီးငယ် )
– သွားကောက်မပေးနဲ့… ( အရူးမကြီး)
– လုပ်ပါဗျာ.. ဒီတခါ နောက်ဆုံးပါဗျာ… ( မိုးလဲ တိတ်ချင်နေပြီကိုး… )
– မရဘူး.. နင့်ကို ရပ်ကွက်လူကြီး နဲ့ တိုင်မယ်… ( အရူးမကြီး )
– ဗျာာာာာာာာ .. မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ…
– ( ဂိုးဒိုင်တွေလဲ ဘယ်သူ သိမ်းလဲ မသိမ်းလဲ မသိတော့ပါ… စိတ်ပျက်လက်ပျက် ခေါင်းငိုင်စိုက်ပြီး ဆိုးပေ တယောက် ပြန်လာခဲ့ပါတယ်.. ဘယ်သူ့ကိုမှလဲ အပြစ်မတင်ပါ… တကယ်တော့ နောက်ဆုံး ကန်လိုက်တာ ချောကလက်ပါ… ဇာနည်တို့ဘက်က ကစ် မမှန်လို့ ဆိုးပေက ဘက်ချိန်းပြီး ကန်တာပါ… နေရာ ရွှေ့လဲ မြေပြန့်ဆိုလို့ အဲနား တ၀ိုက်ပဲ ရှိတာမို့… သိပ်လဲ မထူးပါချေ… )
– ပြန်လာပြီလား… သား…
– ဟုတ်… (စိတ်ပျက်သံ နဲ့ )
– ပြောတော့ ခဏပဲတဲ့… မိုးတိတ်မှ ပြန်လာတယ်… ဘောလုံးရော ဘယ်မှာ ထားခဲ့ ပြန်ပြီလဲ…
– ဇာနည်တို့ ဆော့ချင်သေးတယ် ဆိုလို့ ထားခဲ့တယ်…
– ဒါဆိုလဲ ရေချိုးလိုက်ဦးနော်.. မဟုတ်ရင် အကြောအခြင်တွေ တက်မယ်.. ငယ်တယ် ဆိုပြီး မပေ့ါနဲ့… ခေါင်းလဲ ရေခြောက်အောင် သုတ်…
– ဟုတ် … ( အာခေါင်သံ နဲ့ )
– ဘောလုံးကို နှမြောတသ နဲ့ စာဖတ်ရင်း ဆိုးပေ တယောက် ဆွေးနေပါတယ်… ချွေးနဲစာ နဲ့ ကိုယ်ပိုင် ၀ယ်ထားရတာ… ပြီးတော့ ဘောလုံးက ၃ ထပ်ထပ်ထားတာ…
– မိုးတွေ ပြန်ရွာလာပါပြီ… တဖြောက်ဖြောက် နဲ့ အသံက စည်းချက်လို ဖြစ်နေပြီး ချော့သိပ်သလို ဖြစ်နေပါတယ်… နဂိုကလဲ စာအုပ်ဖတ်ရင်း တွေးနေတာမို့… မျက်လုံးက မှေးပြီး အိပ်ပျော်သွားပါတယ်…
– ဆိုးပေ ရှိလား… ဆိုးပေ… ( အိပ်မက်ထဲမှာလိုလို၊ အပြင်မှာလိုလို နဲ့ ဘဦးစိန်မောင် အသံကို ကြားနေရတယ်… )
– ( စကားတွေ ပြောနေသံ ကြားရတယ်… တွတ်တွတ် … တွတ်တွတ် နဲ့…. )
– ဆိုးပေပပပပပပပ … ဆိုးပေပပပပပပပပပပပ… ( ဒါအိပ်မက် မဟုတ်တော့ဘူး… ကျိန်းသေပြီ… )
– ဗျာ… မယ် ( အမေ ) ( ရင်ထိတ်နေပါတယ်…)
– ( ဘဦးစိန်မောင် ဆိုတာ ရာအိမ်မှူးပါ… ယခင် ရ၀တ မှာ ဧည့်စာရင်းရေးပေးတဲ့.. လူကြီးဆိုလဲ မမှားဘူး…)
– ဟာ… ဟိုအရူးမကြီး… တိုင်လိုက်ပြီနဲ့ တူတယ်… ( တဒိန်းဒိန်းကို ခုန်နေပါတယ်… )
– ဘဦးစိန်မောင်က အိမ်ကို လာခဲ့ပါဦးတဲ့… ( အဲတုန်းက မှတ်ပုံတင် လုပ်ဖို့လဲ ရှိထားတော့ အဲကိစ္စပဲလို့ ဆိုးပေ အမေက ထင်ထားတာပါ… )
– ဟုတ်… မယ်(အမေ) … သား သော(သွား) လိုက်မယ်….
– သား … ဆိုးပေလာ… သားကို ပြောစရာရှိလို့… ( ဘဦးစိန်မောင် )
– ဟုတ်… ဘဘ…
– သားနေ့လည်က ဘောလုံးကန်တယ်မလား… ( ဘဦးစိန်မောင် )
– ဟုတ်… ( ထင်ထားတဲ့ အတိုင်းပဲ… လာတိုင်ထားပြီ….)
– အဲဒါ လာတိုင်ထားတယ်… ဘာမှ တော့ မဖြစ်ဘူးပေါ့ကွယ်… မှန်လဲ မကွဲပါဘူး… အိမ်ထဲပဲ ဘောလုံး ၀င်တာပါတဲ့… ( ဘဦးစိန်မောင် )
– ညနေ… ရုံးကို လာခဲ့လေ… ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး… လက်မှတ်ပဲ လာထိုးလိုက်… ဘာမှ သားကို မထိခိုက်ဘူး… အိမ်ကိုလဲ မပြောဘူး… နော်… ( ဘဦးစိန်မောင် )
– သား .. တယောက်တည်းပဲလား…
– အေး… သူက သားတယောက်ကိုပဲ တိုင်ထားတာ… ပြောတာက ဟိုအောက်ဘက်မှာနေတဲ့ ဂျစ်ကန်ကန် ဘိတ်သားလေးတဲ့… ( ဘဦးစိန်မောင် )
– ဆိုးပေ တယောက်ဆွေးပြီ… ဆွေးခြင်း နဲ့ အတူ ဒေါသပါ ထွက်လာရပါတယ်… လက်မှတ်ထိုးရလဲ အကုန်တူတူပေါ့… ဒါကို ကွက်ပြီး တိုင်တယ်… မြေနိမ့်ရာ လှံစိုက်တာပဲ… ( စာတွေလဲ ဖတ်တော့ သုံးတတ်နေပြီ..)
– သိမ်ငယ်စိတ်တွေလဲ ဖြစ်လာပါတယ်… မျက်ရည်လဲ ကျချင်လာတယ်… ရှိလှ ၄ ၅ တန်းလောက်နဲ့ ရပ်ကွက်ရုံးမှာ ခံဝန်လက်မှတ်ထိုးရမယ်ဆိုတော့….
– ခက်တာက သူက အရူးမ… လူကြီး … မဟုတ်ရင် … ရွယ်တူဆိုရင် ငြိုးပြီး ဆိုးပေ လိုက်ထိုးမှာ သေချာတယ်… တဖြည်းဖြည်း ခံပြင်းလာတယ်… တခုခု ပြန်ကို လုပ်ချင်လာတယ်….
– အခွင့်အရေး ရတာနဲ့… ကလဲ့စားကို ပြန်ချေရမယ်… ငါ လုပ်မှန်းလဲ မသိအောင် လုပ်ရမယ်… စိတ်ထဲက ကျိန်ဆဲနေပါတယ်….
– တောက်… ငါ့ကိုပဲ ရွေးသွားတာ တင်းတယ်ကွာ… တကယ်ကိုေ-ာက် ရေး မပါတာ…
– ဟုတ်တယ်… ဟေ့ကောင် အဲဒါ မမိုက်တာပဲ… ငါတို့ ရှိရင်တောင် တခုခု လုပ်လို့ရတယ်… ( ရဲဘော် အမွှာညီအစ်ကို )
– ( သူတို့တွေက ဆိုးတာ တန်းတူ၊ ပေတာ တန်းတူတွေ … အိမ်က သိပ်မပေါင်းခိုင်းဘူး… ပိုဆိုးမှာစိုးလို့… ဒါပေမဲ့ ပိုသစ္စာရှိတယ်လို့ ဆိုးပေ ခံစားမိတယ်… )
– ငါ တခုခု လုပ်ချင်တယ်ကွာ… ငါမှန်းလဲ မသိစေချင်ဘူး… လုံးဝ လဲ ဆွေ့ဆွေ့ခုန်နေရမယ်… ဘာလုပ်ရင် ကောင်းမလဲ….
– အခုတော့ နေဦးကွ.. မဟုတ်ရင် မင်းလုပ်တာ သိမှာပဲ… အချိန်ကို စောင့်… စိတ်တော့ ရှည်ရမယ်… ( အကြီးကောင် )
– ဒါတော့ စိတ်ချ… မင်းသိပါတယ်… ငါ ဘယ်လိုကောင်လဲ ဆိုတာ…
– အကြံရပြီ… ဆိုးပေ… ဟုတ်တယ်… ( အငယ်ကောင် )
– (ဒါမျိုးကူလီ ကူမာဆို ဒီကောင်က ရတယ်… )
– သူခိုးကြီးည…. သူခိုးကြီးညမှာ… ကလဲ့စားချေမယ်… ( အငယ်ကောင် )
– ဘယ်လို ချေရမှာလဲ… ပန်းအိုးတွေ သွားထား … ပစ္စည်းတွေ စုပုံလား…. ဖီးလ် မရှိဘူးနော်… ဒါက ထုံးစံကြီး… သူ့ဆီကလဲ မ ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး….
– မင်း အိမ်ရှေ့က သံစည်ပိုင်းပျက်က ဘာသုံးလဲ… ( အငယ်ကောင် )
– ဘာလုပ်ဖို့လဲ… ဘာမှ မသုံးဘူး… ရေယိုလို့ ဒီတိုင်းထားတယ်… ကုလားကိုလဲ မရောင်းဘူး… အိမ်က…
– ဒါဆို မင်း အဖုံးတခုလောက် ရှာလိုက်…. ( အငယ်ကောင် )
– ရှာပြီးရင် အဖုံးဖုံးထား… အမှိုက်တွေကို အဲမှာ ပစ်ထားလိုက်… စုထားလိုက်… ဖြစ်နိုင်ရင် ခွေးချေးခြောက်နေရင် … ကလော်ပြီး လာထည့်ထား… အမှိုက်နဲ့ အုပ်…. ( အငယ်ကောင် )
– အာ.. လဖွတ်… ရွံ့ စရာကြီးကွာ… စည်ပင်လုပ်ရမှာလား…. ပြီးတော့ အနံ့ အသက်က မဂွတ်ဘူးနော်… အိမ်က ကလော်လိမ့်မယ်…
– ဒါတော့ မင်းညံ့ သွားပြီ ဆိုးပေ… စဉ်းစားစမ်းကွာ… မင်းကလဲ…. ( အငယ်ကောင် )
– အော်…! ငါလဲ အဲလောက် မညံ့ပါဘူး… သားကြီးရာ… သိသွားပြီ… ( မြူးတူးတဲ့ အသံနဲ့ )
– ဟေ့ကောင်… ဘာတွေ လဲ ငါ နားမလည်ဘူး… ( အကြီးကောင် )
– ဒီလိုဟေ့… #$%^&* သိပြီလား…
– ဂွတ်တာပေါ့ကွ… ၂ လကျော်ကျော်လောက် အချိန်ရတယ်… ကွက်တိပဲ… အဲနွားက အဲလိုကျတော်ပြန်ရော… ( အကြီးကောင် )
– ညီကိုချင်းလာဖဲ့နေသေးတယ်… ( အငယ်ကောင် )
– ကဲ… ဒါဆို သားကြီးတို့ရေ… ချီးယားစ်စ်စ်စ်…..
– ဆိုးပေတို့တတွေ လုပ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်… ရှိသမျှ အမှိုက် နံစော်မယ် ထင်တာ အကုန် စု.. အပေါ်က စကော အဟောင်းကြီးနဲ့ အုပ်… အဲနားမှာ အပင်တွေ စိုက်ထားတော့… လူကြီးတွေကလဲ သိပ်သတိမထားမိကြပါဘူး… သိတော့လဲ အမှိုက်တွေ စုထားတာ… ပြောပါတယ်.. ကံကောင်းချင်တာကလဲ အမှိုက်ကားက မလာတော့… ထိန်းသိမ်းတာ အဆင်ပြေသွားတယ်…
– အဲနေ့ညကိုလဲ ပံ့သကူ ကောက်မယ်ဆိုပြီး အိမ်ကနေ ထွက်ပါတယ်… လူလစ်ပြီလား ချောင်းပါတယ်… ၁၁ နာရီလောက်ဆို တက်ရမှာမို့… တချိန်လုံးကို ချောင်းနေရတာပါ… ကံကောင်းတာက ဆိုးပေတို့ လမ်းက ၉ နာရီလောက်ဆို လူမရှိတော့ဘဲ… မအိပ်လဲ အိမ်ထဲမှာပဲ နေကြတော့ အကြံအောင်တာပေါ့…
– အရူးမတို့ မိသားစုကလဲ အစောပိုင်း အိပ်တတ်တော့ ပို အဆင်ပြေပါတယ်… မပြေတာက တော်တော်ကို နံတာ… သူများကို လုပ်ချင်လို့သာ စုထားတာ.. တကယ်ကို ဟောင်နေတာပဲ….
– ကိစ္စလဲ ပြီး အိပ်လိုက်တာ… သူများ ကျီးမနိုးပွဲ အချိန် ( သူခိုးကြီးည ) ကို မသိဘဲ အိပ်ပျော်နေပါတယ်…
– မနက် သူ့အမေနှိုးပြီး မုန့်ဟင်းခါး သွားဝယ်ခိုင်းမှ နိုးတာပါ… နိုးနိုးချင်း သတိရတာနဲ့ ပေးတဲ့ ပိုက်ဆံကို ကောက်ဆွဲ… ရဲဘော် ၂ ကောင်ကို သွားခေါ်ရပါတယ်…
– သူတို့က ကြိုနိုးနေပြီး… ၃ ယောက်သား ပုခုံးဖက်ပြီး လမ်းထိပ် အလာ…………..
– ဘယ်သေချင်းဆိုး… ကာလနာတွေက… အိမ်ထဲ အမှိုက်လာထည့်ထားတာလဲ…. ခွေးချေးတွေက ပါသေး…. ( အရူးမ ဒေါသပုန်ထနေပါတယ်… )
– ငတိ သုံးယောက်သားကတော့ အရူးမ အိမ်ဘက်ကို လှည့်မကြည့်ဘဲ… ခပ်သုတ်သုတ် အပြေးလေးသော့ လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်… ( အသက်ကို အောင့်ပြီးပေါ့… )
– တော်တော် လှမ်းလှမ်း ရောက်မှ… အသက်ကို ၀ အောင် ရှုပြီး….. သုံးယောက်သား….. လက်မလေးတွေ ထောင်ပြီး…… ရက်စ်စ်စ်စ်စ်စ်စ်စ်စ်စစ်…..
– စာကြွင်း… ဆိုးပေရဲ့ ဒေါသမှာ တနှစ်တည်းနဲ့ မပြီးပါချေ… နှစ်စဉ်မပြတ် လုပ်နေခဲ့တာ… ၅ နှစ်လောက် ရှိပါလိမ့်မယ်… လူလဲ မမိခဲ့ပါ….အခုစာရေးသူ နဲ့ ထို ငတိသုံးယောက်သာ သိသည့် ကိစ္စ ဖြစ်ပါသည်….
– အခုတော့ အမှုတွဲကို ဂဇက်မှာ ဖွင့်ချခဲ့သည့်အတွက်… လှို့ဝှက်ချက် ပေါက်ကြားလျှင် ဂဇက်သူားများရဲ့ တာဝန်သာ ဖြစ်ပါသည်….
တကယ့် ဆိုးပေပါလား ၊ အင်းးးးး အိမ်လိပ်စာပေးလို့ မဖြစ်သေးပါဘူး ၊
ဦးမျိုး .. ဘယ်သူ့ကို ပြောနေတာလဲ… ကျွန်တော်က ဆိုးပေ ဟုတ်ဘူးလေ…
ဟုတ်… သူ့ကို ပြောပြလိုက်မယ်.. မင်း လူမုန်းများတယ်လို့…
နင်းနင်း အိမ်လိပ်စာလေး တစ်ဆိတ်လောက်။
နာ က သူခိုးကြီးညကို မဆင်နွှဲဖူးဘူးဟ။
ဟုတ်လား… ဇီဇီ… ကျွန်တော်လဲ မနွှဲဖူးဘူးဗျ… ခုက သူ ( ဆိုးပေ ) .. ပြောပြသမျှကို ရေးပေးတာ…
.သူခိုးကြီးညကို လည်းပျော်ပျော်ကြီးနွဲဖူးပါရဲ့..ညလုပ်ထားခဲ့ပြီ .မနက်ရောက်ရင်သူများတွေဒေါပွနေတာကြည့်ပြီးရီလိုက်ရတာဗျာ
ဟုတ်.. ဦးမိုက်… ဒါဆို ဦးမိုက်က.. ကြီးမိုက် အပြင် ငယ်ဆိုးပေါ့.. ဟုတ်လား…
ဦးကြောင်လဲ လာအားပေးတာပဲ… ကျေးဇူးပါ…
ငွေ ငါးသိန်းပို့စ်ရော ဖတ်ပြီးပြီလား..
ဟဲ.. အရီး.. ရန်မစ နဲ့ နော်…
တူနှစ်ကိုယ် တိုင်းပြည် မ စ ခင်က… အကြင်နာမျက်ဝန်း အကြောင်းကတော့ ကဗျာတွေမှာပဲ ဖော်ပြထားတယ်…
စိတ်မနှံ့ တဲ့ မိန်းမကြီး နဲ့ ပြိုင်လိုက်တဲ့ ဆိုးပေပေါ့နော်။
ကလေး မို့ ဆိုလဲ မပြောတော့ပါဘူး။
ကိုယ်လဲ တစ်ခါတစ်ခါ မနှံ့တဲ့စိတ်၊ ကလေးစိတ် ဖြစ်နေဆဲဟာကိုလေ။ lol:-))
ဒါထက် မယ်နင်းနင်း ကို တာဝန်ပေးလိုက်ပါလား။
တူနှစ်ကိုယ်တိုင်းပြည် မစ ခင် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကြင်နာအကြည့်တွေ ရဲ့ အကြောင်း ကို ရေးပြပါလို့။
ဟီး… ဆက်ဆက်.. သိပ်မမြှောက်နဲ့.. မျက်နှာကျက်ကို တက်ကပ်နေဦးမယ်…
နောက်ပိုင်း ဇာတ်လမ်းတွေကို Imagination စိတ်ကူးကွန့်မြူးခြင်း မလုပ်နိုင်သေးလို့… ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်လမ်းကိုပဲ ဇာတ်အိမ်ဖွဲ့ ဇာတ်ကောင်မွေးနေရတယ်…
ဘာကိုလဲ အောင်မိုးသူ… လင်းပါဦးဗျ…